Gafadi Kura || विचार Archives - Gafadi Kura Collection
आफ्नै १५ दिने सुत्केरी श्रीमतीलाई कुटपिट गरी आँखा निकालेर तथा योनीमा नारीसम्म हात छिराएर यातना दिई बिभत्स तरिकाले हत्या गर्ने श्रीमान् पक्राउ ।धनकुटामा १५ दिने सुत्केरी श्रीमतिको बिभत्स तरिकाले हत्या गरेर फरार भएका एक ब्याक्तीलाई प्रहरीले पक्राउ गरी मंगलवार सार्वजनिक गरेको छ । सुत्केरी श्रीमति ३२ बर्षिया शान्ती राईलाई कुटपीट गरी बिभत्स तरिकाले हत्या गरेर फरार भएका धनकुटा नगरपालिका ८ चाम्जिवुङ्गका ३६ बर्षिय रस्त बहादुर राईलाई प्रहरीले पक्राउ पछि...
देश भरको बम बिस्फोटमा कांग्रेसको संलग्नता ( प्रमाण सहित)
गुल्मी, २५ भदौ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीले ठुलो परिणाममा बिस्फोटक पर्दाथ बरामद गरेको छ । रेसुङ्गा नगरपालिका ८ का तारा श्रीसको साथवाट बिस्फोटक पदार्थ बरामद गरिएको छ । उनी नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट रेसुङ्गा नगरपालिका ८ का निर्वाचित वडा सदस्य हुन् । श्रीसको साथबाट ३३ थान एक्सपोलसिभ डेटोनेटर, चार थान सुतती बम, एक किलोग्राम बारुद र सेफ्टिफ्युज लगायतका अबैध बिस्फोटक पदार्थ प्रहरी बरामद गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी नायव उपरिक्षक...
पत्रकार रबी लामिछानेको अर्को काम तीन करोड नेपालीको हार्दिक सलाम ! (भिडियो सहित)
काठमाडौं । हामीले कार्यक्रमको यस अघिको अंकमा निधन भईसकेकी एक युवतीको रहस्यमय भिडियो प्रशारण गरेका थियौँ । आत्महत्या गर्नुअघि आफुलाई कसैले आत्महत्याको अवस्थामा पुर्‍याएको भन्दै बाबु आमाको नाममा क्षमा माग्दै आफ्नै फोनमा भिडियो रेकर्ड गरेकी यी युवती गोरखा आरुघाट २ मान्वकी अस्टमी गुरुङ थिइन् । उनको शबसँगै आएको उन्को ब्यागमा फोन भेटियो । फोनमा उनका आफन्तले हेर्दा अष्टमीले म्योसज रेकर्ड गरेकी रहेछिन् । उनका आफन्तले मोवाईल चेक गर्दा भिडियो भेटिएको...
लोक सेवाले निकाल्यो अधिकृतको नतिजा.. पुरा पढ्नुहोला
मंसिर १२ , काठमाडौं । लोक सेवा आयोगले अधिकृत तहको परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गरेको छ । प्रशासन, लेखा परीक्षण र व्यवस्थापिका संसद सेवातर्फ राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी अप्राविधिकको नतिजा मंगलबार सार्वजनिक भएको हो । लोक सेवा आयोगले खुला तथा समावेशीतर्फबाट अधिकृत पास भएका ३६८ जनाको योग्यताक्रम सार्वजनिक गरेको छ जसमा विवेक रिजालले एक नम्बरमा नाम निकालेका छन् । खुलाबाट २०२ जना, महिला कोटाबाट ५३ जना, आदिवासी जनजातीबाट ४७ जना, मधेसीबाट ३७...
देउवाकै गृहजिल्लामा काँग्रेसलाई झड्का दिएर ५ सय कार्यकर्ताले गरे एमाले प्रवेश ! यस्तो बन्यो माहोल
। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता एवम पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल चुनावी अभियानमा सक्रिय भएसंगै गृह जिल्ला इलाम नै एमालेमय भएको छ । खनाल क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिशभाको उम्मेदवार भएपनि उहाँ चुनावी अभियानमा सक्रिय भएपछि समग्र जिल्लामै यसको अशर परेको छ । अहिले क्षेत्र नम्बर १ मात्र होइन खनाल सहभागी जिल्लाका सबै कार्यक्रममा एमाले प्रवेश गर्नेहरुको लहर चलेको छ । खनाल बिभिन्न पार्टीका सयौं नेता कार्यकर्तालाई दैनिक आफनो पार्टीमा भित्र्याइरहनु...
मेष राशि हुनेहरुको जीवन भरको फल पढनुहोस !!!
मेष राशि हुनेहरुलाई पुर्ब दिशा उतम हुन्छ । मेष राशिलाई कन्या राशि शत्रु हुन्छ । मेष राशिप्रधान व्यक्ति स्वतन्त्र निणय लिने समथ‌ हुने , कठिन कार्यलाई आफैले समाधान गर्न आग्रसर हने,साहसिक कार्य गर्नमा आनन्द मान्ने , लडने भिडने प्रवृति सजिलो लाग्नेे , शरिर हृष्टपुष्ट भएको , विशाल मस्ितष्क हसिलो मुहार भएको हुन्छ । मेष राशि हुनेको चञ्चल स्वभाव हुने , अति साहसि , स्फुतिवान , उच्चअाकांक्षी, दृढनिश्चयी शीघ्रअावेशमा अाउने,...
अर्का भारतिय सार्प सुटर फेरि पक्राउ
नेपालगन्ज ११ मंसिर । हातहतियार सहित बाँके प्रहरीले डुडवा गाउँपालिका -६ बन्दिपुरुवाबाट एक जना भारतिय नागरिकलाई अाज बिहान पक्राउ गरेको छ । चेकजाँचको क्रममा भारत बहराइचका ५३ बर्षिय पशुराम पासिलाई दुई थान कटुवा पेस्तोल सहित पक्राउ गरिएको बाँके प्रहरी प्रमुख एसपी टेकबहादुर तामाङले जानकारी दिनुभयो । पासीको वयानका क्रममा डुडवा गाउँपालिका -६ का राजेन्द्र कुमार लोनियाले उक्त हतियार मगाएका प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीले अाजै मध्यान्ह लोनियाको घर खानतलासी गर्दा...
७० बर्षे बुडाले १७ बर्षे युवती संग बिवाह गरेपछि मचियो बबाल (भीडीयो सहित)
दोलखामा यस पटक पनि अनैटो घटना घटेकोछ । जिल्लाको तामाकोशी गाउँपालिकामा ७० बर्षे बुडाले १७ बर्षे केटीलाई जबर्जस्ती बिवाह गरेको पाईन्छ । पहिलो बुढीको मृत्यु भएको सात दिन नपुग्दै आफ्नो छोरी जस्तो १७ बर्षे पद्मा सुवेदी लाई जबर्जस्ती बिवाह गरेका छन । सम्पतिको लोभमा अाएर केटीको परिवरले जबर्जस्ती बिवाह गरिदिएको पद्माको गुनासो छ ।प्रहरी प्रशासन पनि चुप लागेर कोही कारबाही गरेको थिएन । तर अहिले पद्मा जिल्ला प्रहरी कार्यलयमा पुगेर सम्पुर्ण माथी जबर्जस्तिको मुद्दा हालेकि छन...
येसरी खारेज गरियो योजनाबद्ध तरिकाले बाम उम्मेद्बारी
११ मंसिर, काठमाडौं । सर्लाही क्षेत्र नम्बर ४ का वाम गठबन्धनका उम्मेदवार शिवपुजन राय यादवको उम्मेदवारी खारेज भएको छ । उनीविरुद्ध स्वतन्त्र उमेदवार गणेशकुमार सिंहले जिल्लामा र अनिलकुमार सिंहले निर्वाचन आयोगमा कात्तिक १९ गते उजुरी दिएका थिए । आयोगले आफ्नो उजुरी सुनुवाइ नगरेको भन्दै उनीहरु सर्वोच्च अदालत पुगे ।सर्वोच्चले यो मुद्दामा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै आयोगसँग लिखित जवाफ माग्यो । सर्वोच्चलाई जवाफ पठाउनुअघि नै आयोगले शनिबार शिवपुजनको उम्मेदवारी खारेज गरेको...
हिजो कहाँ-कहाँ भयो झडप, हवाइफायरदेखि एसिड अाक्रमणसम्म पुरा बिवरण ….
१० मंसिर, काठमाडौं । पहिलो चरणअन्तर्गत आइतबार ३२ जिल्लामा प्रतिनिधिसभाका ३७ र प्रदेशसभाका ७४ सिटमा मतदान सम्पन्न भएको छ । मतदान सामान्यतः शान्तिपूर्णरुपमा सम्पन्न भए पनि केही ठाउँमा चाहिँ गडबडी र तमासाहरु देख्न पाइयो । पहिलो चरणअन्तर्गत ४४६५ मतदान केन्द्रबाट छिटफुट घटनाहरु भए । मतदानका क्रममा केही ठाउँमा मतपत्र जलाइयो भने केही ठाउँमा बामपन्थी र कांग्रेस कार्यकर्ताहरुको झडपबीच चुनाव सम्पन्न भयो । चुनावका क्रममा केही ठाउँमा नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाका...